READING | Wentworthonline
Ịmụta ịgụ ihe bụ otu n'ime ihe ndị kacha mkpa nwa gị ga -amụta n'ụlọ akwụkwọ. Ihe ọ bụla ọzọ dabere na ya, yabụ anyị na -etinye ike dị ka o kwere mee ka anyị hụ na nwata ọ bụla na -amụta ịgụ ihe ngwa ngwa o kwere mee.
Ebumnuche anyị bụ ịkụziri ụmụaka ka ha nwee obi ike na ndị na -agụ akwụkwọ ruru eru site n'ịmụta ka esi agụ okwu na site n'ịzụlite nka nghọta, nke ha nwere ike itinye n'ọrụ n'ofe usoro ọmụmụ, yana ịzụlite ịhụnanya ịgụ akwụkwọ maka ihe ụtọ.
Anyị na -akụzi ịgụ ihe site na Ntọala Ntọala ruo Afọ 6. Nke a nwere ike ịdị n'ụdị ịgụ akwụkwọ otu na okenye, ịgụ ihe ọnụ; klaasị/obere otu a na -eduzi usoro ọgụgụ akwụkwọ na ọgụgụ onwe.
Ụmụaka niile na -enwe ike iburu akwụkwọ n'ụlọ ka ha na onye toro eto gụọ, mmụta a na -ekerịta ga -enyere ụmụaka aka ịmụta nkà ịgụ ihe na ịzụlite ịhụnanya ịgụ akwụkwọ na ndụ ha niile. A na -agba ndị nne na nna ume ka ha sonye na njem ọgụgụ nwa ha n'oge ha nọ na Wentworth. Iji nyere aka n'ịgụ ihe n'ụlọ na iji hụ na a na -agba ụmụaka ume ka ha gụọ ebe niile na ịma onwe ha aka, anyị nwere ndepụta 'Ọgụgụ akwadoro' maka otu afọ ọ bụla n'ụlọ akwụkwọ.
Agba ntọala / agba nke mbụ
Na Ntọala na Nkeji 1 anyị na -akụzi ụda olu site na nkuzi ụda ụda kwa ụbọchị na -eso usoro ụda edepụtara na 'Akwụkwọ Ozi & Ụda'. Anyị kwenyere na ịkpọ ụda kwesịrị ịbụ ihe ọchị, yabụ kuzie ụda site na iji omume na egwu 'Jolly Phonics' na -adọrọ adọrọ. A na -eji mmemme ' Phonics Play' akwado nkuzi nkuzi ụda. A na -eji usoro ọgụgụ ọgụgụ dị iche iche agbasawanye nghọta ụmụaka, mmasị na ụtọ ịgụ ihe.
N'oge ngwụcha oge ọkọchị, gọọmentị na -agwa anyị ka anyị mee nyocha ụmụaka niile nke Afọ 1. Anyị ga -eme ka ị mara ka nwa gị siri mee nke ọma.
N'oge ngwụcha oge ọkọchị, Afọ nke Abụọ na Afọ nke 6 nwere ule nke iwu ebe a na -atụ ike ha ịza ajụjụ gbasara ederede.
Iji kwadebe ụmụaka maka nke a, anyị na -ahụ na nkuzi anyị nke ịgụ ihe n'ogogo abụọ niile, gụnyere ọtụtụ ohere iji kpaa agwa, ọnọdụ na ihe omume. Ịgụ ihe a maka ihe dị oke mkpa. Ọ dị ụmụaka mkpa inwe ike, ọ bụghị naanị imebi ederede kamakwa ịza ajụjụ dị iche iche gbasara ya.
Nkeji nke Abụọ
Na Nkeji nke Abụọ 2, ka ịgụ akwụkwọ ha na-etolite, a na-agba ụmụaka ume ka ha gụpụta akwụkwọ dị iche iche na akụkọ na-abụghị akụkọ ifo. Anyị na -amalite inyocha otú onye odee jiri asụsụ mee ka mmasị onye na -agụ ya nwee mmasị. Anyị na-eleba anya na atụmatụ nke akụkọ ifo dị iche iche, akụkọ na-abụghị akụkọ ifo na abụ, na-ekwu maka iji usoro na ahịrịokwu dị iche iche.
Anyị na -ejikwa Mmemme Ọgụgụ Ngwa akwalite ịgụ ihe na Nkeji 2. Ụmụ akwụkwọ na -ewere ajụjụ kọmputa na -agụ n'akwụkwọ ndị ha gụrụ wee nweta isi okwu AR ka ha na -aga n'ihu. Ngwanrọ dabere na ịntanetị na-enyocha ọganihu ịgụ ihe ụmụaka ma na-atụ aro akwụkwọ nke dabara mkpa na mmasị ụmụ akwụkwọ. Site na AR, ụmụaka na -enwe ike ịmụta ma too n'ike nke aka ha.
Nkà Ịgụ ihe
Iji nwetakwuo nghọta ụmụaka maka ederede dị iche iche anyị na -eji 'Ịgụ ndị ọbịa'. Ụmụaka niile ga na-arụ ọrụ na ndị VIPERS n'oge a na-agụ klaasị, ma ọ na-agụ ihe dị ka klaasị, na obere otu, ma ọ bụ otu na okenye. Ọ ga -adị mma ma ọ bụrụ na ndị nne na nna nwekwara ike na -ekwu maka ndị ọbịa mgbe ha na -agụ akwụkwọ n'ụlọ.
Ruo ngwụsị afọ 2 'S' na -anọchi anya ya
'Usoro'. Ozugbo ụmụaka batara na Year 3 the 'S'
na -anọchi anya 'Nchịkọta' nke bụ karịa
nkà na -achọ.
Ọ bụrụ na anyị agba mbọ hụ na ụmụaka ruru eru na nka ọgụgụ ọgụgụ a niile, anyị na -ekpuchi ihe niile chọrọ n'ọmụmụ ihe nke obodo wee mee ka ha nwee ike ịgụ akwụkwọ nwere obi ike. Nchịkọta okwu a bụ naanị ụzọ dị mma iji nyere ụmụaka na ndị nne na nna aka icheta ihe nka ndị a dị mkpa.
Enwere ike iji ndị ọbịa n'otu ederede ọ bụla nwata na -agụ, yana foto, akwụkwọ onyonyo na ihe nkiri. Mgbe okenye ọ bụla na -ege nwatakịrị ntị ka ọ na -agụ ya, naanị ihe ha ga -eme bụ ichebara ajụjụ gbasara akwụkwọ/eserese/ihe nkiri nke kpuchiri ndị ọbịa niile. N'okpuru, bụ ọmụmaatụ maka otu ị ga -esi mepụta ajụjụ nke gị site na iji mmeghe ajụjụ ndị a.
Na mgbakwunye na nke a anyị na -eji APE. Nke a na -enye ụmụaka usoro maka ịza ajụjụ nghọta dị aghụghọ. A na -akuziri ụmụaka niile nọ na KS2 ịza ajụjụ maka nrụtụ aka na ederede (Zaa ya ma gosipụta ya) dị ka usoro ọmụmụ obodo si dị. Ka ha na -etolite ma na -etozu oke, gụnyere nkọwa njikọ na akụkụ ndị ọzọ nke ederede na ihe ọmụma tupu ha adị mkpa.
Acronym APE (Zaa ya, gosipụta ya, kọwaa ya) na -enyere ụmụaka aka icheta ka esi aza ụdị ajụjụ a.
Anyị na -agba ụmụaka ume ka ha jiri ngosipụta na ntụkwasị obi na -agụ ihe, na -eme nhọrọ ọmụma banyere akwụkwọ ha họrọ. Oge nkuzi klaasị kwa izu na -achọ ịkụziri nka nka nke ịgụ ihe ka ụmụaka nwee ike ịghọta ederede nke ọma.
Anyị na -achọ ịkwalite ịhụnanya ịgụ ihe site n'inye akwụkwọ na akụrụngwa dị mma ụmụaka nwere ike ịkekọrịta ma nụ ụtọ ma n'ụlọ akwụkwọ ma n'ụlọ. A na -eme ka ịdị mkpa na ọ joyụ ịgụ ihe na -aga n'ihu site na ahụmịhe ọmụmụ bara ụba na nke na -akpali akpali.
Biko lee n'okpuru maka ụfọdụ akwụkwọ ọgụgụ na-enye aka:-
Ọgụgụ na Ụda olu na Wentworth PPT (Nọvemba 2018) ​
Agụmagụ ihe ọmụma
Ibe edokwubara akwụkwọ
Ibe edokwubara EYFS
Ịgụ akwụkwọ ozi: EYFS KS1 KS2 ​
Emere ka ụda olu dị mfe (webụsaịtị Oxford Owl)
Ntụziaka mkpụrụedemede na ụda olu (webụsaịtị BBC)
Ịgụ ihe n'ụlọ (Afọ 6)
Njedebe nke EYFS 50 Okwu ugboro ugboro dị elu iji gụọ / asụpe